The Ultimate Guide to launching a Subscription Video Ọrụ | Martech Zone
Enwere ezigbo ihe kpatara ya Ndenye aha Video On Ina (SVOD) na-agbawa ugbu a: ọ bụ ihe ndị mmadụ chọrọ. Taa ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọ ọdịnaya vidiyo nke ha nwere ike ịhọrọ ma lelee na-achọ, ma ọ bụghị ikiri ha mgbe niile.
Na stats na-egosi na SVOD adịghị akwụsịlata. Ndị nyocha na-ebu amụma maka uto ya iru Ihe ngosi nde 232 nde site na 2020 na United States. A na-atụ anya ka ndị na-ele ụwa anya gbawara na 411 nde site na 2022, site na 283 nde na 2018.
Isi Iyi: ọnụ ọgụgụ
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ndị na-ekiri ekiri bụ ihe ịtụnanya, stats na-atụ egwu anaghị akwụsị ebe ahụ. Enweela ego zuru ụwa ọnụ ga-eru ijeri $ 22. Oke ọdụm ga-aga aha ezinụlọ buru ibu dịka Netflix, Amazon Prime na Hulu, mana enwekwara ọtụtụ narị puku ndị na-emepụta vidiyo nwere onwe ha na-akwụ ụgwọ na ahịa SVOD na-eto eto.
At Uscreen, anyị ga-arụ ọrụ na ndị nwere ọdịnaya vidiyo nwere onwe ha. Ndị a bụ ụdị ndị wuru obodo buru ibu na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa iji nweta ọdịnaya dị elu.
Were Network Stage, dịka ọmụmaatụ. Tọrọ ntọala site na Rich Affannato, Jesse Kearney na Bobby Traversa, echiche a bụ iweta ọnọdụ izizi kachasị mma, ihe nkiri, ihe nkiri nkiri nkiri, ihe ngosi nke eziokwu, ihe ngosi dị iche iche na ihe nkiri maka ndị na-ege ntị.
Taa, maka naanị $ 3.99 kwa ọnwa, ị nwere ike ịnweta ụdị arụmọrụ dị iche iche ozugbo na Apple ma ọ bụ gam akporo ama, ma ọ bụ ngwaọrụ Roku ma ọ bụ FireTV.
Ndị okike SVOD gbasakwara ụlọ ọrụ dị iche iche. Iji maa atụ, Wanderlust TV bụ ọkachamara Jeff Krasno na Schuyler Grant. O mere mgbe ha abụọ ghọtara otu nnukwu ndị na-esote ha si na Wanderlust emume emere na 2009.
Na-aga n'ihu taa na Wanderlust TV na-enye ndị na-anụ yoga ọtụtụ vidiyo. Nwere ike ịhọrọ site na nnukwu ndị nkuzi, nke ọ bụla na-enye mmemme dị iche iche na ọkwa nke nsogbu.
Ọ bụrụ n’ịchela maka ịmalite ọrụ nke gị SVOD, ndị a bụ naanị abụọ n’ime ọtụtụ ezigbo ihe atụ bara uru ileba anya. SVOD, karịa ịbụ ụzọ dị ukwuu isi nweta ego, bụkwa ụzọ dị mma iji kwado atụmatụ ahịa gị niile.
A na-eri vidiyo kwa ụbọchị n'ọtụtụ buru ibu. Ọ dịkwa ebe ọ bụla ị na-aga, nke pụtara na ndị asọmpi gị amalitela ịmepụta vidiyo iji rịọ ndị ahịa gị kachasị mma.
Na blọọgụ a, aga m ekekọrịta otu ị ga - esi bido ọrụ SVOD nke gị. Aga m akọwa otu ụdị vidiyo vidiyo ntinye si arụ ọrụ, otu esi akwadebe akara gị ka ọ dịrị ndụ na ọdịnaya ndị na-ege gị ntị nwere ike ịnweta, yana otu esi azụ ahịa SVOD ọhụrụ gị ma mee ka ndị ọbịa banye ndị debanyere aha.
Mana tupu anyị gwuo n'ime isi okwu ọ bụla, gịnị bụ vidiyo ntinye aka?
Ghọta SVOD Business Model
Ndenye aha vidiyo bụ ọrụ dịịrị ndị debanyere aha maka ụgwọ ọnwa kwa ọnwa. Dịka ndenye aha magazin, ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ ego ma nwee ohere ịnweta ọdịnaya vidiyo. N'adịghị ka ndebanye aha magazin, ọrụ SVOD na-enye ohere ịnweta vidiyo niile ma ọ bụ nwee ike ịnye ngosipụta ewepụtara n'oge.
Ọ bụ ndị na-emepụta vidiyo vidiyo kpebiri ụgwọ ndenye aha ma nwee ike ịdị obere site na $ 2 gbagoo.
Kedu otu ọrụ SVOD ga-esi nwee ihe ịga nke ọma?
Dịka onye na-eweta ikpo okwu SVOD, anyị na-akwado ụlọ ahịa gafee ụlọ ọrụ dị iche iche. Otu n’ime edemede anyị na-enweta nnukwu ego bụ ahụike na ahụike. N'ime afọ a, anyị ahụla ịrị elu 52% na ọnụ ọgụgụ ụlọ ahịa ọhụrụ ewepụtara na ụdị a.
Kedu ihe ọzọ, ụlọ ahịa ọ bụla na-enweta ihe ruru $ 7,503 kwa ọnwa n'etiti Eprel na June. Nke a gosipụtara na enwere ohere maka ndị na-emepụta ọdịnaya vidiyo nwere onwe ha ịbanye na ahịa SVOD ma nweta ego ha ga enweta.
Olee otu i si ebido?
Kwụpụ 1: Chọta Niche Gị ma Zụlite Ahịa
Mepụta niche gị nwere ike ịbụ otu n'ime usoro kachasị mkpa ị ga - eme iji wulite ọrụ SVOD na - aga nke ọma. Ọ bụ ezie na saịtị dịka Netflix na Hulu na-enye onye ọ bụla, anyị ahụla ka ndị okike vidiyo nọọrọ onwe ha na-alụ ọgụ mgbe ha na-anwa ma copyomie ụdị azụmaahịa ahụ.
Niching ala ga-enyere gị aka ịmepụta ọdịnaya ezubere maka otu ndị na-ege ntị. Mgbe ejikọtara gị na usoro aghụghọ azụmaahịa, ị ga-ahụ na ọdịnaya gị ga-erute ọtụtụ ndị ziri ezi, na-ebute uto ị na-esote.
Chọta niche gị ga - emekwa ka ịmepụta akara gị dị mfe.
Ndị mmadụ na-achọ ụdị. Ka o doro anya na ozi akara gị na nhazi gị bụ, ọ ga - adịrị gị mfe ịchọta ya. Mgbe a bịara n’ịrụ ọrụ SVOD gị, akara aka dị mkpa.
Mana ọ karịrị naanị akara ngosi. Ọ gụnyere agba ndị ika gị ga-eji, ụda na olu nke nnomi websaịtị gị, yana ogo na ụzọ pụrụ iche nke na-enwusi ike na ọdịnaya vidiyo gị.
Ka ị na-eche maka akara gị na ihe ọ kwesịrị ịkwado, tụlee otu ịchọrọ ka ndị mmadụ nwee mmetụta mgbe ha risịrị ọdịnaya vidiyo gị. Ọdịnaya gị kwesịrị idozi otu nsogbu.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-enyere ndị mmadụ aka ka ha ghara ibu ibu site na iji vidiyo mmega ahụ.
Kedu ihe ndị na-ekiri ga-enwerịrị mgbe ha na-elele oge mgbatị ọ bụla ma nwee mmetụta mgbe ha mechara ya? Kedu maka akara gị ga-eme ka ha gaa n'ihu na ndenye aha ha?
Wanderlust emeela ụdị ihe dị ndụ na ndụ dị ike. Ha na enyere ndi mmadu aka iru ebumnuche ahụike na ahụike ha n'ọtụtụ ụzọ. Ndị debanyere aha nwere ohere iji ntụgharị uche na-eduzi, nsogbu yoga ụbọchị 21, na ndị ọzọ.
Vidio ọ bụla na weebụsaịtị ha gụnyere ihe edere edere nke ọma, onyonyo nke onye dere ya na ụgbọala na-adọkpụ iji nye ndị ọbịa ụtọ ihe ha ga-atụ anya ya.
Na nkenke, Wanderlust TV kere ezigbo akara ngosi. Ha emeela ka ọ dị mfe maka onye ọbịa ịghọ onye na-edebanye aha wee nọrọzie site na ịmalite site na mbido ruo na ịmecha nsogbu 21 ụbọchị na gafere.
Nzọụkwụ 2: Mee ma hazie vidiyo vidiyo gị
Na-esote, ị ga-achọ weebụsaịtị iji gosipụta ọdịnaya gị. Ọ ga - arụ ọrụ dịka ngwa ahịa iji nyere aka tọghata ndị ọbịa na nnwale na ndị debanyere aha ha zuru oke.
Mepụta na Yourzụlite weebụsaịtị Gị (Mee N'onwe Gị)
Y’oburu n’ichoputa webusaiti, enwere ihe ole na ole i kwesiri ima. Nke mbu, o nwere ike ịbụ mmega ahụ dị oke ọnụ ma dịkwa mgbagwoju anya.
Ọrụ SVOD gị ga-enwe ike ịnabata ma bulie vidiyo na ndị ọrụ. Nke a choro ihe nlere vidiyo nke siri ike iji kwado otutu ahia. Ga-achọ ndị mmepe iji wuo ya na onye njikwa ọrụ iji jikwaa ụlọ ahụ.
Ga-achọ ijikọ ụlọ ahịa ma ọ bụ arụmọrụ e-commerce nke na-enye ohere ịkwụ ụgwọ ndenye aha. Ikwesiri inabata otutu uzo nke ugwo ugwo ma nwekwaa nchebe kacha mma na intaneti (chee zoro ezo SSL) iji kpuchido ebe nrụọrụ weebụ ohuru na ndi nleta dika ha na-agagharị ma ugwo maka ihe di na saiti gi.
SVOD omenala nyiwe na-achọ mmezi. Nke a pụtara oge na-edozi ma na-echekwa nyiwe omenala gị yana obere oge na -emepụta ma na-ere ahịa ọdịnaya gị iji nweta ego.
Na-eme ka usoro ntinye ego niile dị ka Uscreen
N'ihi mgbagwoju anya nke dị n'elu, na ọtụtụ ndị na-emepụta vidiyo abụghị ndị na-emepụta weebụsaịtị na ndị mmepe, anyị mepụtara isiokwu dị mfe iji webụsaịtị.
Isiokwu ọ bụla dị mfe ịhazi ya ma jiri uche gị kee ya. Isiokwu ndị ahụ gụnyekwara peeji ndenye ọpụpụ ebe ndị ahịa nwere ike ịkwụ ụgwọ site na PayPal ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Anyị na-enyekwa nnabata vidiyo (yana oge 99.9%), izo ya ezo SSL, nkwado asụsụ maka ndị na-ekiri gburugburu ụwa, yana ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ dị mkpa, ha niile abanye n'ime ego ndenye aha kwa ọnwa.
Mụtakwuo maka Gburugburu na Omenala Uscreen
Mkpokọta weebụsaịtị gị bara uru dị ka vidiyo ị ga-enye. Ọ ghaghị ịgwa ezigbo onye ahịa gị okwu ka ha nwee obi ụtọ zuru oke gbasara ọdịnaya gị iji nwalee ya ma ọ bụ bụrụ onye debanyere aha.
Nke a bụ ndụmọdụ 3 banyere otu esi emepụta ozi webụsaịtị dị ike
Nka Ndị Ahịa Na-Lekwasị Anya - Isi akụkọ pụtara karịa ụdị niile. Mana ka ha wee na-adọrọ adọrọ, ha ga-enyerịrị ndị ọbịa webụsaịtị. Ka ị na-emepụta akụkọ gị, chee echiche banyere nsonaazụ ikpeazụ nke ezigbo onye ahịa gị ga-enweta site na ịlele ọdịnaya gị. Iji maa atụ, N’ezie Sassy bụ usoro mmega ahụ pụrụ iche. Ọ na-agwakọta ọzụzụ balet na ike na obi. Mgbatị ahụ dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịzụlite anụ ahụ, ma na-agbanwe agbanwe. Ndammana Sassy si website ọnọdụ usoro ihe omume site na iji ndị ahịa na-elekwasị anya isiokwu “nweta ozu nke a ballerina.”
Jiri Detuo Akwadoro Uru - Isi okwu ndị ahịa na-elekwasị anya bụ nzọụkwụ mbụ iji mee ka ndị ọbịa ghọọ ndị debanyere aha. Nzọụkwụ ọzọ na-eji akwụkwọ weebụ iji mepụta akụkọ nke na-akwado ma na-edozi ngwaahịa gị maka ire ere. Wantchọrọ inye ha nlele nke ihe ha na-enweta iji nweta ọdịnaya gị. Ọ bụ ezigbo echiche ịnwe nghọta miri emi banyere ihe ezigbo onye ahịa gị na-atụ anya site na ọrụ ndenye aha dị ka nke gị yana depụta njirimara ọ bụla ma ọ bụ akụkụ nke ọrụ vidiyo gị ma nye uru n'akụkụ ha
Mepụta Oku Dị Ike Ime Ihe - Oku ime ihe bu ihe nkpalite nke ndi webusaiti gi. A na-eji ha eduzi ndị ọbịa gị site n’inye ha ndụmọdụ ihe ha ga-eme ọzọ. Mgbe ejikọtara ya na akụkọ siri ike na idetuo, oku ime ihe ga-emechi nkwekọrịta ahụ.
Oge nnụnụ bụ ọrụ SVOD maka ndị gọọlfụ. Ha ejirila isi okwu gbara ọkpụrụkpụ na idigide izi ozi jiri oku dị ike ime ihe (“Nweta nnweta niile”).
Imagery - Dị ka oyiri, ihe onyonyo na-enyekwa aka n'ịmepụta mkpokọta weebụ siri ike ma dị irè. N'ezie, nchọpụta gosiri na ndị mmadụ na-ejigide ozi 65% ọzọ mgbe edere ya na ihe oyiyi dị mkpa. Akụkụ kachasị mma maka iji onyonyo maka webụsaịtị gị bụ na ịnwere ike iwebata eserese vidiyo. Ha ga-enye ndị ọbịa ihe atụ doro anya nke ihe ga-atụ anya mgbe ha na-akwụ ụgwọ.
Kwụpụ 3: Buru App OTT gị
Ngwa ndị dị n'elu, ma ọ bụ ngwa OTT, bụ ngwa na-ebute vidiyo site na ịntanetị. N'adịghị ka USB ma ọ bụ satịlaịtị TV, ngwa ọdịnala OTT na-enyekwa ndị ahịa gị aka ịgha vidiyo na ngwaọrụ mkpanaka (smartphones na mbadamba) na TV, oge ọ bụla ha chọrọ.
Video gụgharia ngwa bụ ihe dị mkpa nke ọrụ SVOD nwere mmanụ, mana ha enweghịkwa mgbagwoju anya. Ọ gwụla ma ị bụ onye nrụpụta, ị ga-enwe usoro mmụta mmụta dị nkenke ka ị na-anwa ịwube ngwa nke gị.
Nwere ike iku onye nrụpụta kama, mana nke ahụ bụ mmega ahụ dị oke ọnụ. Emepe a bụ isi iOS ngwa nwere ike ịbụ $ 29,700 na $ 42,000 - ewepu vidiyo ma ọ bụ ndụ gụgharia n'elu ikpo okwu ike na Bochum maka vidiyo gị.
Dị ka ihe ngwọta, anyị na-enye ọrụ ntụgharị maka ndị na-emepụta ọdịnaya SVOD. Ndị mmepe anyị ga-ewulite ngwa gị ma hụ na ọ jikọtara ya na akụrụngwa anyị niile. Nke a na - enye gị arụmọrụ na ike niile ịchọrọ iji malite ngwa OTT gị ma echegbula onwe gị banyere vidio vidio ma ọ bụ na ị ga - enwe ike iru ndị na - ege gị ntị.
Etu esi choo OTT Video Streaming App gi
Ickingnweta ngwa OTT gị dabere na otu ndị na-ege gị ntị na otu ha ga-esi jiri ọdịnaya gị. Na a Ọmụmụ ihe Uscreen, anyị chọpụtara na 65% nke vidiyo vidiyo niile na-eme na ngwa TV na mobile OTT.
Anyị mụtakwara na iOS nwere ọnụọgụ kachasị na ahịa ndị na-asụ Bekee, ọkara ọkara ndị ọrụ TV na-ahọrọ Roku.
Ọ bụ ezie na ụdị ozi a nwere ike inyere gị aka ịhọrọ ngwa kwesịrị ekwesị maka ndị na-ege gị ntị, buru n'uche na oriri sokwa na mma.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-enye ahụike na ahụike dị mma nke gụnyere mgbatị ahụ zuru oke, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ime ka ọdịnaya gị dị site na weebụsaịtị gị yana kee onwe gi Roku na ngwa FireTV.
N'ụzọ dị otú a, ndị na-ekiri ha nwere ike ịhụ mmegharị ahụ zuru oke ma rụọ ha na-enweghị ịnwale ma jide ngwaọrụ mkpanaka, lelee ya ma mee ahụ ahụ otu oge.
Kwụpụ 4: Dọrọ Ìgwè Gị
Nọ n’agba ikpeazụ! Ighaghachi, ị maara ihe SVOD bụ ma ghọta mkpa ọ dị iwulite akara ngosi na weebụsaịtị siri ike ma dịkwa irè. Makwaara ihe nhọrọ gị bụ maka ịmepụta ngwa OTT gị yana otu esi achọpụta ngwa nke ịhọrọ nke ga-adabara ndị na-ege gị ntị.
Ọzọ, anyị na-adanye n'ime adọta ezigbo ndị ahịa gị.
Marketingzụ ahịa bụ sayensị karịa taa. Nke a bụ n'ihi na ụdị ahịa ọ bụla etinyere n'ịntanetị nwere ike ịdabere na data, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịme mkpebi ndị ọzọ gbasara otu esi etinye ego na mgbasa ozi.
Ma ebee ka ị malitere?
Ingdọrọ ndị na-ege ntị abụghị ihe mgbagwoju anya dịka ị nwere ike iche. Ee, enwere ọtụtụ mgbanwe iji tụlee. Site na oge nke ụbọchị ruo oge yana etu ihe ndị a si emetụta ọnụọgụ pịa na n'ikpeazụ ahịa.
Mana ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike ikpebi etu ihe ndị a si emetụta ahịa gị na atụmatụ ya.
Imirikiti data ị chọrọ dị na nyiwe ị ga-eji maka ahịa.
Dịka ọmụmaatụ, Facebook na-enye ọtụtụ ozi gbasara ndị na-ege ntị. Na ntinye ole na ole, ị nwere ike ịchọpụta etu ndị na-ege gị ntị buru ibu, ebe ha nọ, ọrụ ha nwere, ihe ndị ọzọ ha nwere, na ego ole ha nwere ike inweta.
Ihe mgbaru ọsọ gị bụ ịchọpụta ebe ndị na-ege gị ntị nọ ma debe ozi siri ike n'ihu ha.
Taa, e nwere ihe karịrị 50 usoro mgbasa ozi mmekọrịta dị iche iche, mana ọ bụghị ha niile ga-arụ ọrụ maka akara gị. Kwesịrị ịchọta nyiwe ebe ezigbo ndị ahịa gị na-anọ.
Kedu? Jụọ onwe gị ajụjụ a:
Ebee ka ezigbo onye ahịa gị na-aga ịchọ ozi gbasara otu esi edozi nsogbu ị ga - eji ọdịnaya vidiyo gị dozie?
Ndị a bụ ebe ole na ole ndị na-ege gị ntị nwere ike iwepụta oge:
Social Media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest na Snapchat.
Chọọ Enjin: Google, Youtube, Bing, Yahoo! DuckDuckGo na MSN.
I nwekwara ike ịkwalite ọrụ SVOD gị site na email. Ọ bụrụ na ị nwere ndepụta ndị debanyere aha, ịmepụta mgbasa ozi email na izipu ozi ziri ezi nwere ike ịdị irè. Dị ka ndị debanyere aha, ha ga-amaworị aha gị, na-eme ka ọ dị mfe ire ndenye vidiyo na ndepụta gị.
Na mgbakwunye na listi email gị, gbalịa mgbasa ozi naanị. Otu mgbasa ozi bụ ozi email depụtara ma zigara ndepụta nke ndị debanyere aha nke onye ọzọ. Mgbasa mgbasa ozi nwere ike mepụta ọnụọgụ ntụgharị dị elu, mana chọrọ izi ozi siri ike ma dị mkpa ka ọ dị irè.
SVOD na-etolite ma gosipụtaghị ihe ịrịba ama nke ịkwụsịlata. Ọ bụ ezie na nnukwu ụdị ga-achịkwa ahịa ahụ, enwere ohere maka ndị na-emepụta ọdịnaya vidiyo nwere onwe ha iji wepụta ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ a na-eto eto.
Iji malite ọrụ SVOD na-aga nke ọma, ị ga-enwerịrị akara ngosi dị ike nke ndị na-ege gị ntị ga-ada ma mepụta weebụsaịtị dị mma yana imepụta ihe mara mma yana ozi siri ike nke ndị ahịa. Ikwesiri ịhọrọ ngwa OTT ziri ezi maka ndị na-ekiri gị ma chọpụta ma zụọ ndị na-ege gị ntị ka ha wuo ntọala nke ndị debanyere aha.
Tags: ndụ video gụghariamobile ott ngwagụgharia video na inasvodvideo hostingvideo na ina